ချစ်ရအောင်: Html ကုဒ်အကြောင်း ( HTML Paragraph )
Html ကုဒ်အကြောင်း ( HTML Paragraph )
သင့်ဝက်ဆိုက်မှာ စာရေးတဲ့အခါ စာပိုက်တွေကိုခွဲပြီးရေးနိုင်တယ်၊ စာပိုဒ် တစ်ပိုဒ် စီမှာတော့ စာပိုဒ်ဖြစ်ကြောင်း HTML Tags နဲ့ မှတ်သားထားရမယ်၊ စာပိုဒ် အတွက် အသုံးပြုတဲ့ HTML Tags ကတော့ အဖွင့်
တို့ကို စာပိုဒ်တစ်ခုရဲ့ အစ နဲ့ အဆုံးမှာထည့်ပေးပြီး စာပိုဒ်ဖြစ်ကြောင်းကို သတ်မှတ်ရပါတယ်၊ အောက်က ဥပမာ ကိုကြည့်ပါ၊
You win it’s your show now so what is gonna be, cause people will tune in how many trined trick do we need to see.
အထက်က HTML Document ကို Run ကြည့်လိုက်ပါ၊ ဒါဆိုရေးထားတုံးက ရောရေးထားပေမယ့် သင့်ဝက်ဆိုက်မှာတော့ စာပိုဒ်တွေခွဲပြီး ဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ၊ ဒါကတော့ အဖွင့်
ဆိုတဲ့ Paragraph tags ထည့်ထားလို့ပါ၊
စာပိုက်တော့မခွဲချင်ဘူး စာကြောင်းပဲ ခြားချင်တယ်ဆိုရင်လဲ စာကြောင်းခြားတဲ့ HTML tag ဖြစ်တဲ့ line break
ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်၊ တစ်ချို့တော့ နောက်က မျဉ်းစောင်းကိုထည့်မရေးဘူး၊
က အဖွင့် ပိတ်ကို တစ်ခုထဲမှာပဲ လုပ်သွားတယ်၊ ပြောချင်တာက အဖွင့်
ဆိုပြီးတစ်လုံးထဲပဲထည့်ရတယ်၊ အဖွင့် နဲ့ အပိတ် မရှိတာကြောင့် သူ့ကို self closing tag လို့ခေါ်တယ်၊ ထည့်ရမယ့် နေရာကို စာကြောင်းကို အဆုံးသတ်ပြီး နောက်တစ်ကြာင်းကိုပြောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ အဆုံးသတ်မယ့် စာကြောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးမှာထည့်ရမှာ၊ အောက်မှာဥပမာကိုကြည့်ပါ၊
You win it’s your show now so what is gonna be, cause people will tune in how many trined trick do we need to see, befor loose touch of we though this was slow, will it’s best getting worse where would all good people go.
အထက်က ဥပမာမှာ အဆုံးသတ်လိုတဲ့စာကြောင်းတွေရဲ့နောက်မှာ
ကိုထည့်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ့စာကြောင်းအဆုံးသတ်သွားပြီး နောက်ရေးသမျှစာတွေအားလုံး နောက်တစ်ကြာင်းကိုရောက်သွားမယ်၊
စာကြောင်းခြားတဲ့ Tag ဖြစ်တဲ့
နဲ့ စာပိုက်ခြားတဲ့ tags ဖြစ်တဲ့
တို့မတူကြပါဘူး၊ စာပိုဒ် tag အတွက် browser က ရှေ့နဲ့ နောက်မှာ နေရာလွတ်ချန်ပေးထားပါတယ်၊ နို့ပေမယ့် စာကြောင်းခြားတဲ့
tag အတွက်တော့ နေရာလွတ်မထားပေးပါဘူး၊
HTML Horizonal Line
စာပိုက်တစ်ခုအောက်မှာမျဉ်းကြောင်း ထားလို့ရပါတယ်၊ Line မျဉ်းကြောင်းကို ကိုစားပြုတဲ့ HTML tag ကတော့
ဖြစ်ပါတယ်၊ သူလဲ Line break tag
လိုပဲ self closing tag ပါ၊ အဖွင့် အပိတ် နှစ်ခုမရှိဘူး၊ မျဉ်းတားလိုတဲ့ စာပိုဒ်ရဲ့အောက်မှာ
လို့ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ မျဉ်းကြောင်း တစ်ကြောင်းတားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်၊ အောက်မှာဥပမာကြည့်ပါ၊
အထက်က ကုတ်ကို Run ကြည့်လိုက်ရင် စာတစ်ကြောင်းအဆုံးလို့သတ်မှတ်ပြီး
ထည့်ထားတဲ့စာသား အဆုံးမှာ မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းဆွဲထားတာတွေ့လိမ့်မယ်၊ အထက်က ဥပမာ မှာတော့
ကိုသုံးထားရင် line break
ကိုသုံးစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ HTML tag နဲ့ ထည့်ထားတဲ့မျဉ်းကြောင်းတွေကို အရွယ်အစား နဲ့ အရောင်ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ သင်ပြပေးပါမယ်၊
HTML Doucment တစ်ခုရေးရင်း မှတ်သားစရာပေါ်လာတယ်၊ မှတ်ချက်ထည့်စရာပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖြင့် အဲ့ဒီ့ HTML Document ထဲမှာပဲ မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်၊ အောက်မှာ HTML Comment ထည့်တဲ့ ပုံကိုကြည့်ပါ၊
အထက်က HTML Document ကို Run လိုက်ရင် hey what are you doing ဆိုတဲ့ စာသားကိုတွေ့ရမယ်၊ ဒါပေမယ့် I am learning HTML ဆိုတဲ့စာသားကိုတော့ မတွေ့ရပါဘူး၊ အကြောင်းကတော့ ဆိုတဲ့စာသားက comment ဖြစ်နေလို့ပါ၊ အလုပ်လုပ်နေရင်း မှတ်သားချင်တာတွေရှိရင် အဲ့ဒီ့ comment ထည့်တဲ့နည်းကိုသုံးပြီး မှတ်သားနိုင်ပါတယ်၊ ရေးပုံကတော့ တို့ ကြားမှာ မှတ်သားလိုတဲ့ စာသားမှန်သမျှ ရေးရပါတယ်၊